Mhedziso yemamiriro ezvinhu muindastiri. Pasina rekodhi kusvetuka, asi netarisiro yekukura - "Potato System" Magazini
Mhedziso yemamiriro ezvinhu muindastiri. Hapana rekodhi inokwakuka, asi netarisiro yekukura
Alexey Krasilnikov, director director wePotato Union
Kudyarwa kwembatatisi mumwaka mutsva kwakatanga nekunonoka uye panguva yekunyora (Chivabvu 24) yanga isati yapera, kunyangwe mamiriro ekunze achibvumidza kuwedzera kumhanya, zvinoreva kuti mapurazi mazhinji anowana nguva yekusangana neagrotechnical nguva dzakatarwa.
Nzvimbo iri pasi pembatatisi ichawedzera sezvanga zvichitarisirwa, asi hapana zvido zvekukwakuka kwakakosha. Kazhinji, fungidziro yegore razvino revatambi vemusika ine tariro, uye mumakore mashanu anotevera vanozove netarisiro huru.
Tisati tagara pamusoro penyaya idzi zvakadzama, ngatitii mazwi mashoma nezvekuguma kwemwaka wapfuura: zvinogona kunzi zvakabudirira kwazvo kune varimi vembatatisi.
Mitengo yekutengesa mbatatisi kubva pakutanga kwematsutso kusvika pakati pegore yaive pavhareji yakapetwa ka2-2,5 zvakapetwa pane zvinoenderana nemumwaka wapfuura uye zvakabvumidza vagadziri vekurima kuti vanzwe kuvimba.
Kubva kutanga kwaMay, takacherekedza kudzikira kudiki kwemitengo muchikamu chekutengesa, zvinokonzerwa nekuvapo kwezviyero pamusika (na1 Chivabvu 2021, anenge zviuru mazana 572 matani ezve zvigadzirwa zvaive zvichiri pachiyero chakakura mabhizimusi ekurima, gore rakapfuura chiyero chaive zviuru mazana mashanu nemakumi masere nematani) uye kuwedzera kwehuwandu hwekunze.
Zvingangodaro, chokwadi chekuti zvimwe zvezvigadzirwa zvakaramba zvisina kutengeswa zvinokonzerwa zvakanyanya nezvinetso zvemhando yepamusoro (zvakanyanyisa, kusakwana kwezvinhu kune zvinodiwa nemaketeni ezvitoro pakuonekwa uye caliber).
Huwandu hwekupinza mbatatisi kuRussia mwaka uno hwakawedzera kana ichienzaniswa neiyo yapfuura, asi zvakadaro hatingataure kuti vari "kutsimbirira" musika.
Saka, muna Ndira, nyika yedu yakatumira zviuru zvitanhatu zvematani embatatisi, ayo zviuru zvina mazana mana - kubva kuBelarus, matani 6 - kubva kuEjipitori. Nekudaro, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti nzira yekugovera mbatatisi dzekutanga dzeIjipita yakavhurwa pakutanga pane zvakajairwa (nekuda kwekuti ngetani dzekutengesa dzaive dzisina chokwadi chekuti paizove nemavhoriyamu akakwana echigadzirwa chemhando yepamusoro cheRussia pamusika. Muna Kukadzi, huwandu hwekupinza kunze kwenyika hwatokura kusvika zviuru makumi maviri nezvishanu zvematani, ayo matani 4,5 akauya achibva kuEjipitori. Republic of Belarus yakatumira matani mazana mana mazana masere nemakumi masere neshanu nematatu ematafura matapiri nematani makumi maviri nemakumi mana embeu kuRussia.
Zvinonzwisisika kuti mimwe mbatatari yembeu yakaunzwa kuRussia muna Kubvumbi: matani mazana matanhatu nemakumi matanhatu, makumi maviri nematanhatu matani kubva kuBelarus nematani zana nemakumi masere kubva kuFinland. Uye huwandu hwakazara hwekupinza matapiri (kusanganisira anotengesa iwo) akasvika zviuru zana zvematani.
Iko kuyerera kukuru kwembeu kwakatanga chete muna Chivabvu. Panguva imwecheteyo, zvinhu zvakaunzwa kubva kuFinland, Germany neScotland zvakaunzwa munyika pamwe chete ne "green corridor", pasina vhidhiyo sampling, uye mbatatisi kubva kuNetherlands, Poland, France zvakapfuura nhanho dzese dzekusimbisa zvinoenderana nemirau yeRosselkhoznadzor. .
Huwandu hwakazara hwembeu mbatatisi dzakapinda muRussia kubva kune dzimwe nyika nemwaka wekudyara wa2021 hazvizivikanwe parizvino. Pakutanga, varimi vekurima vakanyorera kuunzwa matani zviuru gumi nezvipfumbamwe, asi isu tinotenda kuti pachokwadi chiyero chekutenga chinosara padanho regore rapfuura (19 zviuru zvematani) kana kudzikira zvishoma. Asi zvave kutanga kwazvo kupfupisa mhedzisiro, mimwe mitambo ichiri munzira.
Ndichipedzisa nhaurirano nezvekupinzwa kwembeu, ini zvakare ndichataridza chimiro chakatsiga: nemwaka wega wega mutsva, zvekushandisa zvekushandisa (kunyanya minitubers, michero-michero zvichiri kunetsa kupinza) zviri kuwedzera kuwanda .
Sekureva kweBazi rezvekurima reRussian Federation, muna 2021, angangoita mazana maviri nemakumi maviri ezviuru mahekita achapihwa matapiri mune indasitiri. Yeuka kuti gore rapfuura, sekufungidzira, mbatatisi dzaifanirwa kutora mahekita zviuru mazana maviri nemakumi masere, asi zvirizvo, goho rakaitwa kubva ku290 mahekita zviuru. Kana isu tikashandisa yazvino data kuenzanisa, iyo yekuwedzera ichave zviuru makumi maviri nezvishanu mahekita.
Vatungamiriri vashanu maererano nenzvimbo dzinotarisirwa vanosanganisira Bryanskaya (27 zviuru mahekita); Tula (zviuru makumi maviri mahekita); Nizhegorodskaya (20 zviuru mahekita); Moscow (13,8 zviuru mahekita) uye Sverdlovsk (13,6 zviuru mahekita) matunhu.
Panguva imwecheteyo, tinoona kuti makuru makuru ekurima mwaka uno akasarudza kusaita shanduko dzakakura kuzvirongwa zvavo zvembatatisi: mumwe munhu akasiya huwandu hwekutanga hwekurima, vamwe vakadzikisa nzvimbo zvishoma, vachitarisira kubhadhara kudzikiswa kuburikidza nekushandisa kwemazuva ano ruzivo.
Tichifunga izvi, tinogona kuita mhedziso yekutanga kuti kuwedzera kwakanyanya kwenzvimbo yembatatisi (iyo yakanyanya kunyorwa nezvayo uye kutya) hakuzoitika gore rino.
Kukura kwechido mutsika kunoonekwa kunyanya mumatunhu aya ekugadzirisa mabhizinesi ari kugadzirira kuvhura (kana kuwedzera masimba). Dzimwe mbatatisi dzakasimwa, semuenzaniso, mudunhu reNovosibirsk, uko chirimwa chembatatisi chePepsiCo chiri kuvakwa; mudunhu reLipetsk, uko Belaya Dacha Kurima iri kuzoisa mutsetse wechipiri kugadzirwa kwemaFrench (kuwedzera huwandu hwezvigadzirwa zvakagadziriswa nemazana zana ematani pagore).
Zviripachena, vanonatsa vacharamba vachishanda sevatyairi vekusimudzira indasitiri mune ramangwana. Mutsetse uyu ndewedunhu reTula, uko mumakore anotevera mafekitori ekugadzirwa kwemaFrench (McCain Foods Rus) nemapatata (IP M.Zh.Avetisyan) achatangwa.
Pakati paMay, mumatunhu mazhinji, pakanga paine lag yakakomba kuseri kweyakajairika mitengo yekudyara. Vazhinji vakapinda mumunda vhiki mbiri dzanonoka, sezvo mamiriro ekunze mukutanga kwaMay anga asiri akanakisa (munzvimbo dzepakati uye mudunhu reVolga pakanga paine huwandu hwemvura, kwakadzika tembiricha).
Kune rimwe divi, makambani akati wandei akakwanisa kushandisa kunonoka kwevhiki mbiri kuti vawane mvumo kubva kuRosselkhoznadzor uye kuronga mashandiro ezvigadzirwa zvikuru zvembeu.
Ikozvino basa ratove kutoenderera nenyika yese. Sekureva kwedhipatimendi rekushanda kwemitumbi yevatarisiri veiyo agro-maindasitiri akaomesesa eiyo Russian Federation, muna Chivabvu 21, mumabhizimusi ezvekurima nemapurazi (mapurazi), mbatatisi dzakasimwa pa159,5 zviuru mahekita (iri 54,9% yenzvimbo inofungidzirwa). Panguva imwecheteyo, mumatunhu akati wandei, kutonhora kwemamiriro ekunze kwakatsiviwa nenguva yekupisa kusingaite (10-12 ° C inodziya kupfuura zvakajairwa). Asi sezvo munzvimbo zhinji kuchine hunyoro hwakakwana munzvimbo inotakurika, ichi chishuwo chechisikigo hachimiriri kukohwa mune ramangwana. Mune ramangwana, mumatunhu epakati eRussia, vafemberi vanovimbisa kushanduka kwemamiriro ekunze anodziya zvine mwero pamwe nemvura dzinonaya, izvo zvinobatsira mukusimudzira kwakakwana kwetsika.
Kazhinji, iwo makambani akakurumidza kupedza kudyara akatora nzvimbo dzakanaka dzekutanga mumujaho wekukohwa.
Kana tichikurukura nezvenyaya yesarudzo yemhando dzakasiyana nevarimi vekurima, tinovimba nedhata reRussia Agricultural Center kubva 2020, asi mumwaka mutsva, hapana shanduko yakakosha yati yaonekwa.
Sezvakamboitika, mugove weshumba wenzvimbo dzeRussia dzembatatisi (57%) mubhizimusi rinotorwa nemhando gumi, 10 dzadzo ndedzesarudzo dzekunze. Uye izvi kunyangwe hazvo makumi mapfumbamwe nemakumi mana nemana pari zvino akanyoreswa muRejista yeHurumende. Pakazara, zvinoenderana nezvakabuda mumushandirapamwe wekudyara wa9, vagadziri vekurima vakashandisa 494 yemhando yembeu pakudyara. Kuti tienzanise, muna 2020, mhando mazana mana nemakumi matatu nematatu dzakanyoreswa muRejista yeHurumende, iyo 169 yaidikanwa nevarimi vekurima.Ndiko kuti, huwandu hwemhando dzakasiyana huri kukura, uye kufarira kwevarimi mune zvigadzirwa zvitsva kuri kudonha, izvo zvave kuyedzwa pamusoro pemakore ekurima kunoramba kuri pane runyorwa rwevatungamiriri.
Pakati pezvakanaka zvinoitika, kudzikiswa kwekushandiswa kwematata asina kuzivikanwa kunofanira kusimbiswa: muna 2018, zviuru mazana maviri nemakumi mana emazana embeu isiri yemhando dzakasiyana (264% yehoriyamu yakazara) yakaenda kunodyara, uye muna 33 - 2020 zviuru zvematani (221% ). Chikonzero chikuru: kushandiswa kwembeu yakasimbiswa chave chinhu chinodiwa pakutambira rubatsiro.
Kana mamiriro ekunze akakodzera mumwaka, huwandu hwekukohwewa kwembatatisi muchikamu chezvinhu hunosvika padanho rakajairika rematani emamirioni 7-7,5. Uye kubva pakuona kwenyanzvi dzePotato Union, huwandu uhwu hwekugadzira hungangokwana, uye mune ramangwana, kuchengetedza kugadzirwa padanho rimwe chete kunotyisidzira nyika nekushomeka kwembatatisi.
Sekureva kwaRosstat, mwero wekudzikira muhuwandu hwegoho rakakomba - nekuda kwekuramba kwemaRussia kurima zvirimwa munzvimbo dzavari - iri kuramba ichiwedzera. Munguva kubva 2000 kusvika 2015, kudzikiswa kwegore negore kwakaramba kuri padanho remazana zviuru mazana matanhatu. Kubva 600, matani miriyoni akatobviswa kubva pahuwandu hwemari.
Ipo ichichengetedza huwandu hwazvino hwekuenda, huwandu hwekuunganidza mune yakazvimiririra dzimba dzemakambani haupfuure mamirioni 2026 matani na6,7 (muna 2020: mamirioni 12,7 ematani).
Uye maererano nezvakafanotaurwa nehunyanzvi, panguva ino chete mabhizinesi ekugadzirisa achadya matani emamirioni matatu ezvigadzirwa (ikozvino - matani emamirioni 3). Nzira chete yekudzivirira kushomeka kwembatatisi ndeyekuwedzera kugadzirwa. Kukura kwenzvimbo munyika kunofanirwa kunge kuri kungangoita 1,6% pagore. Pasi pemamiriro aya, panosvika 5, mbatatisi dzinotora anenge mahekita zviuru mazana matatu nemakumi matanhatu nematanhatu, uye huwandu hwegoho rakakura mubhizimusi rinosvika padanho rinodiwa rematani gumi nemamiriyoni gumi nematanhatu.
Nguva ichataura kana zviremera nevamiriri veindasitiri vachateerera kune pfungwa dzenyanzvi, asi pane zvishoma zvishoma zvasara kuita sarudzo dzakakosha.
Tags: mbatatisi inokuraMubatanidzwa wembatatisikugadzirisa mbatatisinharaunda mbatatisi
Denmark inoda kugadzira chikafu chinotora kubva kumashizha emishonga
Chikamu chechipiri cheiyo LVM RUS chirimwa chekugadzirwa kweFrench fries ichavhurwa kutanga kwa2023